Warshadeenu waxay leedahay qalab wax soo saar oo horumarsan, tikniyoolajiyad wax soo saar oo qaangaar ah, iyo awood wax soo saar oo deggan. Hadday tahay tayada alaabta ama baakadaha, waxaa naga go'an inaan siino macaamiisha sida ugu fiican. Iyada oo ku saleysan is-aaminaad labada dhinac ah, waxaan aasaasnay ​​saaxiibtinimo iyo iskaashi muddo dheer ah oo aan la leenahay macaamiisheena. Sababtoo ah waxaan diyaar u nahay inaan tagno maylka dheeraadka ah, annagoo ku kalsoon inaan noqon doonno doorashadaada koowaad iyo lammaanaha joogtada ah ee goobtan.
12V Auto A/C kombaresarada Warshadaha Warshadaha Waayo Suba ...
Nooca cusub ee AC Compressor oo leh Lidka Nissan Juke ...
12V Auto Ac kombaresarada Waayo Mitsubishi Colt / MITSUBI ...
12v 24v Portable Universal Saqafka Sare Fuulay Baabuurka Sl ...
12V Auto Ac Compressor ee Mitsubishi Colt / MITSUBISHI LANCER / LANCER EVOLUTION X / OUTLANDER
Waxtarka mugga leh ee kombaresarada weelka Rotary ayaa si gaar ah u sarreeya, rotor -ku wuxuu ku ordi karaa xawaare aad u sarreeya, sidaa darteed awoodda qaboojintu waa xoog badan tahay. Qaybaha ugu muhiimsan ee kombaresarada vane Rotary waa block dhululubo, rotor, dhidibka ugu weyn, daab, waalka qiiqa, daboolka dhammaadka dambe, daboolka dhammaadka hore oo leh xajin iyo sita dhidibka ugu weyn.
Nooca Cusub ee AC Compressor oo leh Lugta Nissan Juke / Nissan Micra IV / Nissan Juke Nismo / Nissan Versa
Doorka kombiyuutarka baabuurku waa inuu cadaadiyo qaboojiyaha si loo kordhiyo heerkulka iyo cadaadiska. Waqtigaan, heerkulka qaboojiyaha wuxuu ka sareeyaa heerkulka deegaanka, waxaana qaboojiyaha lagu qaboojiyaa qaboojinta hawada, ka dibna heerkulku wuu yaraadaa cadaadiskuna wuu yaraadaa. Aaladda dhexdeeda, heerkulka qaboojiyaha ayaa hoos u dhacaya cadaadiskuna hoos ayuu u dhacaa.
12V Auto A / C Compressor Manufacture Factory ee Subaru Impreza / Subaru Stella / Subaru Impreza XV
Kombaresarada hawo qaboojiyaha baabuurtu waa wadnaha nidaamka qaboojinta baabuurta, kaas oo ka ciyaara doorka cadaadinta iyo gudbinta uumi qaboojiye. Kumbiyuutarrada AC waxay u qaybsan yihiin laba nooc: kala-guur aan isbeddelin iyo kala-beddel. Kombaresarada hawo qaboojiyaha waxaa loo qaybin karaa kombaresarada barakicinta go'an iyo kombaresarada barakicinta doorsoomaha iyadoo la raacayo mabda'a shaqada kala duwan.
Qaboojiyaha Hawada Daaqada Cusub ee 12V 24V Ultrathin Model Baabuurka Baabuurta Baabuurta ee Baabuurta La Dhigo
Xilliga xagaaga oo aad u kulul, waxa ugu xusuusta badan waa gaadiidleyda. Gaadiidleyda ayaa maalin walba si adag ugu shaqeeya waddada, waxay u fiicnaan lahaayeen noloshooda. Xitaa haddii ay jiraan waxyaalo kala duwan oo hadh -qaboojin ah oo hadh leh, Markay sugaan alaabta ku jirta saparka baarkinka, waxay heli doonaan xariir filar qabow, u oggolow saaxiibbada kaarka inay helaan jawi nasasho qabow oo raaxo leh.
12v 24v Saqafka Guud ee La Qaadan Karo ee Baabuurka Xamuulka qaada ee Hurdada Korantada Baabuurka Qaboojiyaha Hawada
Xilliga xagaaga kulul, wadista baabuurka habeen iyo maalin, kuleyl aad u kulul, qaboojiyaha korantada korantada ee baabuurka caqliga leh ayaa meel fog ka maamuli kara heerkulka gaariga, oo kuu oggolaanaya inaad meel fog ka hagaajiso heerkulka gaariga markaad jiifto, oo aad ku raaxaysato qabowga kuleylka . Hawada qaboojiyaha noocan ahi waa mid hufan oo tamar-badbaadinaysa, hawlgal deggan, buuq yar, oo si dhakhso ah u qaboojin kara booska baabuurka si ay kuu keento niyadda wanaagsan markaad baabuurka waddo iyo markaad shaqaynayso. Hawo -qaboojiyahaan la qaadan karo wuxuu ku habboon yahay baabuurta waaweyn, gawaarida waaweyn, basaska, RV -yada, doonyaha, baabuurta injineernimada, iwm.
Compressor Auto Ac oo loogu talagalay Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz
Kombaresarada hawo qaboojiyaha baabuurka waa “wadnaha” nidaamka qaboojinta baabuurta. Marka nidaamka qaboojiyaha baabuurka la shido, kombiyuutarku wuxuu dhaqaajiyaa ficilka, cadaadinta iyo kaxaynta qaboojiyaha iyada oo loo marayo nidaamka qaboojiyaha ee xiran.
Kombiyuutarrada Hawo -qaboojiyaha Gawaarida iyo Golaha Qabashada ee Suzuki Wagon R / Suzuki Jimny / Alto
Badeecadayadu waxay leedahay cabbir aad u yar, buuq aad u hooseeya oo shaqeynaya, nolol shaqo oo ku habboon oo dheer, wax -qabad fiican oo wax -ku -oolnimada qaboojinta.